Fikradda naqshadaynta quruxda badan ee 24 Dumarka Fikradda Wanaagsan ee Ragga iyo Dumarka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
24 XIDIGA WAXYAABAHA LAGU DHACAYO Fikradda naqshadda ragga iyo dumarka
Haddii aad tahay qof jecel habeenkii ama aad ogaatid waxa dhacaya habeenkii iyo waxyaabaha la xiriira mugdiga, waxaa laga yaabaa inaad u baahato sida tattoo waa naqshadeynta tufaaxa. Dumar-yahyadu habeenkii haystaan ​​waa guluubyada oo waxay noqdeen calaamad muujinaysa waxyaabahan aan hubin.
Tattoo Owl waxaa loogu talagalay kuwa jecel qarsoodiga mugdiga ama xitaa shisheeye. Tilmaamaha Owl waxaa loo isticmaalaa in lagu matalo Habeenkii Soomaliya iyo dhulkii aan la aqoon.
Owl wuxuu u taagan yahay rajo laga qabo xilliyo cabsi leh ama murugo leh. Fikradda xooggan ee #owl ee habeenkii sababtoo ah aragti qurux badan ayaa dadka ku dhibaysa. Waxay macnaheedu noqon kartaa markhaati ah in uu jiro iftiin marka la dhameeyo tunnelka. Muxuu yahay tattoo wuxuu noqon karaa awood, sixir, riyo, cad, hanuunin, garasho, xikmad, wacyigelin iyo badbaadin.
Waxa kale oo loola jeedaa xiriirka magic, xoog iyo riyooyin fiican. Dumarka waxaa loo qaadan karaa siyaabo badan oo ay ku dhamaato macno weyn oo aad jeclaan lahayd. The owl #tattoo wuxuu noqon karaa xusuusin qof geeriyoodey iyo sidoo kale in aan dhamaanteen noloshaan ku noolaaneyno si buuxda.
Noocyada xayawaanka ah waxaa sidoo kale laga helaa macnahoodu sida sonkorta caamka ah ee caanka ah ee loo yaqaan 'tattoo' ama tufada nacnaca. Tusaale ahaan dadka reer miyiga ah waxay jecel yihiin Maalinta Tafafiraha Dhimasho sababtoo ah doorka ay ka dhigan tahay. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo kan kan jirka ah u baran karo si uu isbeddel sameeyo. Dhamaadka maalinta, waa qofka xiran, oo si sahlan uga hadli kara waxa tattoo macnaheedu yahay.
1. Fikradda naqshadeynta quruxda badan ee Blue Owl ee gacanta
Ma aragtay qof leh tattoo guurka? Waa maxay maskaxdaada marka aad aragtid qof sida? Waxaa jira tifaftiryo badan oo ku saabsan gogolka adduunka oo dhan.
2. Fikradda Marxaladda Badbaadinta Wanaagsan
Si kastaba ha noqotee, waxaad tahay qofka kuu sharxaya waxa muusikada ka dhigan tahay haddii aad ku dhejisid jirka.
3. Awoodda quruxda badan Owl fikradda naqshadaynta gabdhaha
Xagga Giriigta, guurka waxaa la rumaysan yahay in dadka qaar ay yiraahdaan waxay ku xiran tahay xaasidnimo. Waxaa jira aamin ah in ay ka hadlaan xorriyadda halka dad badan ay arkeen guurtu sida xuriyad ama calaamad mugdi ah
4. Owl Fikradda naqshadeynta laftirka haweenka
5. Naqshadeynta qurxinta Owl Arm ah #idea wiilasha
6. Colorful Owl iyo Tattoo skull fikradda ragga
Waxaa jiray wakhti ay raggu ahaayeen kuwa kaliya ee kufilnaa jidhkooda. Sheekada ayaa maanta isbedeshay iyadoo ragga iyo haweenku ay hadda isticmaali karaan tattooankan iyada oo aaney jirin meel ka baxsan.
7. Fikradda madow ee madoow ah ee quruxda badan ee gacanta gabadha
Waxaad tahay naqshadeynta naqshadda sawirkaaga. Markaad heshay shaati-ka-diirran oo diirada saarta maskaxdaada ama aad ka jawaabtay su'aashaada adigoo metelaya fikrad gaar ah, waa masuuliyadaada inaad hesho farshaxan.
8. Owl Fikradda tattoo inkirta cagaha gabadha
9. Fikrado naqshad leh oo qurux badan oo qurux badan leh fariin qoraal ah
Naqshadeynta tattoo ayaa laga yaabaa inay u muuqato mid ka baxsan halkan. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan haysan farshaxan kaas oo si fiican ugu matalaya jidhkaaga, waxaa laga yaabaa inuu noqdo musiibo.
10. Geela midabka leh fekerka jilicsan ee loo yaqaan 'tattoo ink'
Dad badan ayaa waqtigooda iyo lacagtooda ku qaatay iyagoo isku dayaya in ay helaan tattoo dhamaystiran oo keliya si ay u dhammeeyaan shaqo tattoo oo xun. Xaaladda sii xumaantu waxay mar walba dhacdaa marka dadku ay helaan sawirada sawirada oo joogta ah.
11. Garbaha gacmo dhaadheer naasnuujinta dumarka
Waayo-aragnimadu waa wax aan la qiyaasi karin.
12. Lovely Owl Fikradda Tattoo ku calaamadee curcurka gabadha
Markaad haysato farshaxanka wanaagsan, sawirkaaga waa nus dhamaystiran iyo marka tattoo loo saxo oo ka fiican, shaqada ayaa la dhammeeyaa.
13. Fikradda buuxda ee qurxinta Owl tattoo ink loogu talagalay wiilasha
Tartu waxay noqon kartaa mid macquul ah, muuqaal, awood, xikmad, riyooyin, wacyigelin, ilaalin, garasho, iyo hagid. Waxay macnaheedu tahay waxyaabo badan oo dadka kala duwan. il image
14. Owl fikrada naqshadeynta feerka ee ragga
Waxay xitaa macnaheedu noqon kartaa wax dhacey waqtiyada mugdiga ah ee noloshaada. Mararka qaarkood, guumaysigu wuxuu noqonayaa wacyi garasho leh oo aan ku guuleysan karno wax kasta oo aan maskaxda ku hayno xitaa waxyaabahaanu inaga weyneynin. il image
15. Dib u noqoshada quruxda quruxda qurxinta ee gabdhaha
Waxaa jira khuraafaad ah oo xiriir la leh guurka oo leh xikmad iyo aqoon. Xitaa godka Giriigga ah ee xigmaddu wuxuu ka dhigayaa isticmaalka huuriga ah sida totems. il image
16. Fikradda Afka Wanaagsan ee Dheerka ah ee Waaweyn
Waxaa sidoo kale jira qarsoodiga geela uu ahaa qof haysta dhimasho. Hase yeeshee, tani macnaheedu maahan inaadan haysan karin tufo qurxoon oo jirkaaga ku jira. il image
17. Garbaha illaa iyo badh aad u yar fikradda Owl ee ragga
Dumarka waxay xitaa u adeegi karaan matalaad isku xirnaanta sixirka iyo ruuxiga ah. Isticmaalka tufaaxa guumaysiga ayaa noqday wax uun oo kaliya dad yar oo raadinaya waxyaabo kala duwan oo waxtar ah. il image
18. Fikradda Sheeko Owl ee loogu talagalay haweenka
Looma baahna in laga walwalaa khaldan oo ah waxa shimbiruhu u taagan yahay. Waxaad u isticmaali kartaa habka ilaalinta ama xitaa tusi sida loo bartay in aad tahay. il image
19. Fikradda xidigta ee Owl Owl ee haweenka
Owls waa xayawaano gaar ah oo awood leh oo mugdiga ah oo dad badani isticmaalaan sheekooyinka. il image
Quruxda quruxda badan ee quruxda badan
20. Fikradda Owstka ah ee feerka ah ee ragga
Waa inaadan ilaawin in geeluhu u isticmaalaan ilaaliyeyaasha waxyaabaha aan la garaneyn ama wax cabsi ah. Waxaad ku dari kartaa astaamo kala duwan haddii aad rabto. Waxaad tahay qofka runtii ogyahay waxa aad doonayso inaad hesho maalinta dhamaadka. il image
21. Cute iyo Amazing yar oo saddex guuto ah oo tilmaan ah fikradda gabadha
Haddii aad haysato tattooist wanaagsan, waad nasaneysaa sababtoo ah isaga ama iyada ayaa ku siinaya naqshad kaas oo maskaxdaada ku dhufanaya. il image
22. Dib u qurxinta quruxda Owl fikradda saxda ah ee haweenka
Dumarka waxaa lagu dhejin karaa qayb kasta oo ka mid ah jirkaada. Marka ay timaado sameynta bayaanka ah in dadka ugu badan ee tattoo aysan awoodin inay sameeyaan, tattoo guurtu waxay noqon kartaa waxaad u baahan tahay. il image
23. Aragtida naqshadeynta qurxinta hoose ee maskaxda
Tilmaamo Owl waa naadir inay helaan oo qurux badanaaba eegaan. il image
24. Fikradda sawir gacmeed oo badhkeed ah oo loogu talagalay dumarka
Maxaa weli kaa ilaalinaya inaad u tagto tattoo guurtida? Cabsida iyo xuruufta ay tahay in ay isku dhafan tahay waxay noqon kartaa wax laga yaabo inaad noloshaada ku darto il image
Halkan guji si aad u badan Tattoo Owl
Dhaqdhaqaaqatattoos ubaxkoi kalluunkatattoos sleevecalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahhenna tattooTilmaamta jaalaha ahsawirada gabdhahanaqshadeynta mehnditattoos qabaa'ilkaarrow Tattootattoo maroodigamuusikada muusikadatattoos eaglesawir gacmeedtattoo ah octopustattoos qosol lehtattoos taajkiitattoosJoomatari Tattooswaxaa la dhajiyay tattoossawirrada raggatattoo tilmaansawirada malaa'igtalaabto laabtalammaanahaTattoo FeatherTattoos Wadnahatattoo biyo ahku dhaji tattoostattoos qorraxdatattoos iskutallaabtajimicsiga bisadahafikradaha tattootattoos qoortaTartoo ubax badantattoo dheemanlibto libaaxtaraagada kubbaddagadaal u laaboTattoo infinitytattoos cagtashaatiinka shiidantattoos moontattoo indhahawaxay jecel yihiin tattoostattoos saaxiib saxa ahshimbir shimbirtattoos gacantagaraacista gacmaha